पुरातन रूस मा मुख्य भण्डारण माध्यम। मिडिया को इतिहास
यसको शुरूआत देखि मानवजातिले ज्ञान लागि खोजे छ। यो सबै को पहिलो, वन्यजन्तु एक कठिन र कहिलेकाहीं एकदम भयंकर प्रतियोगिता गराउँछ छ। एक शत्रुतापूर्ण वातावरण यसको आला फेला पार्न, जीत, मानिस विशेष गरी Schwartz, विकसित गर्न बाध्य भएको थियो। सबै पछि, Neanderthals को अनुहार मा होमो Sapiens को पनि पहिलो प्रतिनिधिको बल र चपलता saber-toothed टाइगर्स र गुफा भालू संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। तर कसरी संचित ज्ञान संरक्षण गर्न? को के छ जानकारी वाहक पुरातन रूस मा कुनै पनि अन्य भन्दा बढी revered थियो?
किन स्थानान्तरण अनुभव सन्तानहरू?
मान्छे जनावर को unbridled शक्ति nullify थप प्रविधी र चाल संग आउनुहोस्। प्रशिक्षण को सन्तानहरू - तथापि, विकास प्रक्रियामा पुरातन र अर्को समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ। छोटो औसत जीवन अवधि, कहिलेकाहीं ज्ञान र उसलाई मरिरहेका को अनुभव दिइएको। नयाँ पुस्ता उदाहरणका लागि, प्राचीन रूस मा कुनै पनि भण्डारण मिडिया प्रयोग गर्न सक्षम रहेको छैन, आफ्नो गल्ती पहिले नै सिकेका छ। यो निकै सम्पूर्ण विकासवादी प्रक्रिया बाधा पुऱ्याएको र निरन्तर अस्तित्व को कगार मा मानिस राखे।
सायद यो भविष्य पुस्ताका लागि अनुभव र ज्ञान पुरातन रक नक्काशियों को लेखक सारियो स्थानान्तरण गर्न इच्छा छ। अक्सर त्यहाँ शिकार, चिकित्सा र quackery र पहिलो मान्छे को अन्य उपयोगी कक्षाहरू को दृश्य चित्रण गरिएको छ। यसलाई यसरी तिनीहरूले पुरानो प्राकृतिक मिडिया फेला पार्न प्रयास गर्ने तर्क गर्न सकिन्छ। आखिर, तिनीहरूलाई केही शताब्दीपछि मार्फत पारित गरेको छ र वर्तमान दिन बाँचे छन्।
समय, संरक्षण र अनुभव को प्रसारण को समस्या झन् महत्त्वपूर्ण बन्ने छ। ज्ञान जम्मा पछि सारांशित र अर्को पुस्तालाई गर्न स्थानान्तरण बढि राम्ररी वर्णन माग गरेका थिए। सबै सौन्दर्य र एक विशेष कार्य को petroglyphs nuances को गहिरो अर्थ लागि, तिनीहरू अझै पनि पारित भएन। हामी पनि उदाहरणका लागि, कसरी शिक्षा र सिक्ने पुरातन रूस मा हेर्न इच्छुक छन्।
जानकारी के विचार गर्नुपर्छ?
यो पत्ता लगाउन जस्तै जानकारी के हो उचित छ। सबैभन्दा विशेषज्ञहरु को विचार र गणना Sublimating, यो परिभाषा दिन: यो व्यक्ति, प्रस्तुति को फारम निर्भर गर्दैन घटनाहरू र घटना, मा डाटा को एक सेट छ। हामी घरेलू सामग्री कुरा भने, जानकारी - एक व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण वा सार्वजनिक बाट प्राप्त जानकारी छ।
विकास को एक परिणाम रूपमा लिखित देखा स्रोतहरु, को संचित डेटा को keepers। भौतिक वाहक - समय वा ठाउँ मा केंद्रित पछि प्रसारण लागि डाटा को सेट समावेश कागजातहरू छन्।
अध्ययन पुरातन सामाग्री वाहक थप अझै intangible थियो कि निष्कर्षमा, टी। ई आउन मानिसहरू विशेष मौखिक फारम आफ्नो ज्ञान स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यस मामला मा मानव कारक अत्यन्तै अविश्वसनीय छ।
लेखन र कागजात
पुरातन समयका "कागजातहरू" को यस्तो अवधारणा रूपमा भए तापनि तिनीहरूले हाम्रो दिन तल आउन गरेको स्रोतहरू लेखिएका छन्। त्यसैले, यो के हो?
निस्सन्देह, केही खण्डका संग जो आधुनिक archaeologists छन् कागजातहरू petroglyphs, छलफल गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले भन्ने टाढा विगतमा भयो घटनाहरूको बारेमा जानकारी व्यक्त गर्न, बदलिने डिग्री छन्। अहिलेसम्म यी सामाग्री वस्तुहरु र आफ्नो विकास लेखन को उद्भव संग आए।
एक रोचक तथ्य शुरुवात मान्छे मा रक्स मा "पुरानो जमानाको तरिका" आफ्नो लेखोटहरू राख्न प्रयास छ। शायद पुर्खाहरूको डाटा प्रसारण को यो विधि को विश्वसनीयता बारेमा भन्न करार। तर अनुभव यो छैन कि देखाइएको छ। यस तथ्याङ्कले गर्न यसको विपरीत, पुरातन लेखोटहरू अक्सर incoherent वर्ण थिए, सूक्ष्मता त चाँडै कमजोर हुँदै गइरहेको वा अधिलेखन सञ्चय। तसर्थ, हेर्न जस्तो कुरा आजकल एकदम गाह्रो छ।
माटो - सबैभन्दा पुरानो भण्डारण माध्यम
मिडिया को इतिहास मान्छे बढि सुरक्षित पक्षबाट आफ्नो विचार रेकर्ड गर्न सिकेका छन् जब समय देखि, सायद, सुरु हुन्छ। पुरातन कागजातहरू सिर्जना गर्न पहिलो उपलब्ध सामाग्री को एक माटो हुन्छन्। यो सरल सामाग्री मेसोपोटामिया पुरातन बासिन्दाहरूले पत्ता थियो। यो Sumerians सानो माटोको पाटीमा आफ्नो लेखोटहरू scratching आविष्कार थियो।
जानकारी प्रस्तुत को यस्तो विधि रक र पर्खाल चित्रकला देखि markedly फरक छ। र हुनत यो लिपि यो कल गर्न सक्दैन, केही ट्याब्लेटको हाम्रो दिन बाँचे छन् भन्ने तथ्यलाई, धेरै भन्छन्। विकास संग को Sumerian सभ्यता बिस्तारै थप जटिल बन्न र पूर्ण र ट्याब्लेटको बन्नेछ। ताजा माटो मा यो आकर्षित गर्न सजिलो छ, र एक विशेष चरित्र शैली निचोडा।
आफ्नो सभ्यता को अन्त मा, सम्पूर्ण पुस्तकहरू लिखित र एक वास्तविक पुस्तकालय सिर्जना माटो ट्याब्लेटको प्रयोग पुरातन Sumerians। सबैभन्दा पुरानो प्राकृतिक मिडिया, को अश्शूरी राजा Ashurbanipal को पुस्तकालयको रूपमा हामीलाई थाह छ संग्रह जो, यो 30,000 भन्दा बढी ट्याब्लेटको थियो। र यो पुरातन मान्छे खुलिरहेको जो जानकारी, को एकदम गम्भीर प्रवाह भन्छन्।
केही शताब्दीपछि मा तरिका - धातु गर्न माटो बाट
त्यतिन्जेल लेखन, थप र थप विकास गरे। कि लेबल मा देखिन्छ पाठ, अब भयो। माटो यसको प्राकृतिक संरचना एकदम भारी छ मा छ, त्यसैले प्राचीन मानिसहरू लामो ओपस बचत गर्न असुविधाजनक थियो।
के आवश्यक थियो वैकल्पिक वाहक थियो। मानिसजातिको इतिहास मा सबै भन्दा प्राचीन प्राकृतिक मिडिया के थियो? माटोलाई मान्छे पछि थप परिष्कृत हड्डी वा धातु प्लेट प्रयोग गरेका छन्। यी कागजात को पहिलो उल्लेख पुरातन मिश्र छन्। यसलाई सुधार र प्लेट मा लेखन सुव्यवस्थित भन्ने थियो। मुद्रण एक छिनो र इच्छित पाठ scratching एक विशेष मसालेदार शैली प्रयोग गरिएको छ।
को compactness र डाटा वाहक को विश्वसनीयता दिइएको कहिलेकाहीं तिनीहरूले सम्पूर्ण कविता राखिएका छन्। पुरातन युनानी, उदाहरणका लागि, आफ्नो सन्देशहरू नेतृत्व ट्याब्लेटको मा, दुष्टात्मा stripping लागि चिहान मा त तिनीहरूलाई राख्दै लेखे।
यो नवीनता छानिएन थियो र प्राचीन रोम। सीनेट द्वारा प्रकाशित थिए जो decrees, गर्न विल्स देखि - खातामा साम्राज्य को समग्र ज्योति बासिन्दाहरू लिएर, यो यस्तो प्लेट लगभग सबै लेखिएको थियो कि आश्चर्य छैन। तथापि, उत्तरार्द्ध मामला मा, यो त flaunt विषय हो जो चरेस, मा गरेको थियो। तथापि, platelets को उत्पादन पनि एक धनी रोमन को लागि, राम्रो महँगो थियो।
मोम - डाटा वाहक लागि सस्तो समाधान
सजीले मोम बाहिर गर्न थाले। जग हाथीदांत वा काठ को थियो। यसको अगाडि पक्षमा एक इन्डेन्टेसन मा मोम पोखे। यो लेख्न र आवश्यक भएमा धारिलो लेखनी लेखिएको छ मेटाउन जो मा आधुनिक reusable बच्चा स्क्रिन एक प्रकारको बाहिर गरियो। हामी यसरी प्राचीन र आधुनिक मिडिया सम्बन्धित छ भनेर भन्न सकिन्छ।
प्रणाली 1500 वर्ष लामो भनेर सफल भएको थियो। र मोम ट्याब्लेटको हाम्रा पुर्खाहरूले, तिनीहरूलाई tserami भनिन्छ जो द्वारा प्रयोग गरिन्छ। उल्लेखनीय छ कि पुरातन रूस मा यो भण्डारण माध्यम अक्सर लेखा र phonebooks रूपमा रूसी व्यापारीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ तथ्य छ। तर यो मात्र एक व्यापारिक मान्छे tsery लिङ्कमा छ। तिनीहरूलाई decrees र व्याख्याहरु लागि उत्पादन सार्वजनिक सेवाहरू। उदाहरणका लागि, माथि अब यसलाई एउटा अचम्मको कागजात, मिति XI शताब्दीमा पुगेको छ। यो नोभगोरोड कोडेक्स भनिन्छ, र चार पृष्ठ शामिल थियो।
Papyrus - सबैभन्दा पुरानो कागज
दुर्भाग्यवश, मोम ट्याब्लेटको को climatic अवस्था कारण अक्सर तिनीहरूले जीर्णता फसे। स्पष्ट कारण तातो मौसम खडा छैन tsery। यो प्राचीन रूस मा जानकारी को प्राथमिक वाहक छँदा मिश्र बासिन्दाहरू papyrus देखियो। हो, माटो ट्याब्लेटको को मामला मा रूपमा, यो नवीनता को जन्म ठाउ मिश्र थियो।
पहिलो papyrus विद्वान को रूप xxv शताब्दी ई.पू. मिति। papyrus को निर्माण को लागि कच्चा माल नील को बैंकहरू मा प्रशस्त मात्रामा बढ्छ जो एक छडी, रूपमा सेवा गरे। आफै गरेर, papyrus पातलो स्ट्रिप्स मा कटौती र त्यसपछि जो ठूलो र चिल्लो ढुङ्गा मा मिल्दाजुल्दा राखे पनि बोट, को कोर देखि गरिएको थियो। उहाँले, पालो मा, scorching मिश्रको सूर्य अन्तर्गत राखिएको थियो। सुकाउने पछि, papyrus हात्तीदाँतको गरे विशेष scrapers पलिश। तयार-को खान papyrus लामो टेप छ, र यो यसैले प्राथमिकताको को स्क्रल भण्डारण गरिएको छ।
केही हदसम्म पछि पुस्तकमा इस्पात पानाहरू जडान गर्नुहोस्। Papyrus ग्रीस मा र रोमन साम्राज्य मा एकदम व्यापक थियो। तर यो जानकारी वाहक को लोकप्रियता को बाबजुद अझै पनि अविश्वसनीय थियो। अक्सर उहाँले भताभुङ्ग जलाए, धूलो द्वारा SPOILED। तर, papyrus गरिएको कागजात को एक नम्बर यो दिन बाँचे। तर, यो बरु नियम एउटा अपवाद छ।
पुरातन रस एक भण्डारण माध्यम रूपमा papyrus लगभग प्रयोग गरिएको छैन। हाम्रा पुर्खाहरूले मोम ट्याब्लेटको को रूप मा एक अधिक विश्वसनीय सामाग्री छनौट, र त्यसपछि छाल।
दोस्रो शताब्दीमा ई.पू., मान्छे चर्मपत्र को उत्पादन महारत छ। यो सिद्धान्त ट्रिगर सम्भव छ "सबै नयाँ छ -। तरिकाले पुरानो भूल" तर पशुको छाला फेरि डाटा वाहक भविष्य उत्पादन को लागि एक आधार रूपमा प्रयोग गर्न थाले। papyrus देखि मुख्य फरक सामग्रीको उच्च बल मा शामिल थिए। हामी अझ हलचल बिना पर्गामममा मा आविष्कार र, आफ्नो उत्पादन को नाम दिए।
नयाँ मिडिया को लागत papyrus भन्दा धेरै उच्च थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद चर्मपत्र दृढ र निर्धक्क भई प्रयोग पातलो र नाजुक ईख प्लेट फ्याँकिन्छ। यो जनावर को untanned चर्मपत्र छाला, प्राथमिकताको भेडा वा bovine देखि गरिएको थियो।
द्वितीय शताब्दी ई.पू. देखि चर्मपत्र मिति को उपस्थिति लगभग। वैज्ञानिकहरू अनुसार, यो सामाग्री लोकप्रिय papyrus छ। पुरातन रूस मा यो जानकारी वाहक, यो धेरै पाण्डुलिपिहरूमध्ये द्वारा प्रमाणित को प्रयोग, माथि हाम्रो दिन बस्ने गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई।
चर्मपत्र एकदम पुरातन संसारमा व्यापक थियो, तर किनभने सबै मानिसहरू को उत्पादन को उच्च लागत को एक वैकल्पिक खोज्न थाले।
बर्च छाल - प्रकृति को एक उपहार
रूस मा, चर्मपत्र लगभग XV शताब्दी सम्म उत्पादन छैन। सबै विदेश बाट ल्याएको थियो, त्यसैले townsfolk उहाँले उपलब्ध थियो। माटो ट्याब्लेटको संग मामला छ रूपमा, मान्छे बिस्तारै भनेर एक रूख लेखन को लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ निष्कर्षमा आए। यो papyrus, अर्थात् को निशान कुनै न कुनै एक काठ सतह को सामने मा वर्ण को निर्माण, एक गम्भीर टेनिंग छैन। यस्तो विधि एकदम सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को लागत र गरे "कागज" सार्वजनिक कम गर्छ।
यो प्रविधि को कहानी इक्वेटोरियल देशहरूमा यसको मूल को छ। त्यो पश्चिमी युरोप र प्राचीन रूस गए त्यहाँ बाट यो थियो, तर अलिकति परिमार्जन र सुधार भएको छ। यो जानकारी वाहक को उत्पादन को लागि काठ को प्रयोग सम्पूर्ण कागज उद्योग को गठन मा एक प्रमुख र निर्णायक भूमिका थियो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। तर भविष्यमा।
को आठ शताब्दी ई.पू. बाट सुरू हुने, व्यापक प्रयोग गरिन्छ काठ बोर्डहरू पुरातन रूस मा छ। रूस मा लेखन को लागि सामाग्री को निर्माण मा सन्टी छाल प्रयोग। यसैले आपत्ति तिनीहरूले सोध्न भने पहिलो आउने odious नाम: "? पुरातन रूस मा जानकारी वाहक के थियो" बर्च छाल।
उत्पादन प्रविधि strikingly सरल छ। सन्टी छाल भित्री तह देखि बेकारी थिए preforms हीटिंग पछि, त्यसपछि ध्यानपूर्वक किनारा कटौती। परिणाम एक टेप (रोल) थियो, वा पनि आयत को किनाराको मा।
नियम, birchbark अप स्क्रल मा, लिखित पाठ तत्संबंधी बाहिर मा आफूलाई फेला रोल्ड। पदहरू फलाम वा हड्डी बनेको विशेष लेखनी निचोडा। बर्च छाल सबैतिर रूस मा प्रयोग गरिन्छ। कारण cheapness र निर्माण सजिलो गर्न, तिनीहरूले जनसंख्याको फरक खण्डहरूमा पहुँच योग्य छन्।
किसान headman तिनीहरूलाई जनगणना शवर, रिपोर्टिङ र नीति मा लगे व्यापारीहरु को सन्टी छाल यसको इच्छा प्रदर्शित छन् थिए। पनि प्लेट बीच fastened एक सन्टी छाल देखि एक सानो पुस्तक उत्पादन। सन्टी-छाल पत्र को Extant उदाहरण तिनीहरूले ठूलो परिमाणमा प्रयोग गरियो कसरी स्पष्ट प्रमाण हो। उसलाई अनुसार प्राचीन रूस को इतिहास निशान। रूस मा शिक्षा प्रमाणपत्र र लेखन सीप, मात्र संरक्षण र महत्त्व जोड जो प्राप्त आवश्यक जानकारी को प्रसारण।
कागज - अन्तिम चरणमा
इतिहासकारहरूले कागज को द्वितीय शताब्दी ई.पू. चीन मा देखा भन्छन्। यसको उपस्थिति unreliability र पाटी, papyrus र चर्मपत्र को रूप मा जानकारी प्रसारण को अवस्थित हालतमा को उच्च लागत कारण हो। रेसमको cocoons बिग्रेको, बनाइएका कागज उत्पादन को पहिलो नमूनाहरू कि पछि tanned सन प्रयोग गर्न थाले।
105 B.C मा .. ई। चिनियाँ मास्टर कै Lun mulberry खन्नु फाइबर, rags, काठ खरानी र सन देखि कागज उत्पादन गर्न थाले। यो सबै एक विशेष फारम पानी संग मिश्रित छ, र त्यसपछि सूर्य देखियो। सुकाएपछि, मास्टर धेरै ध्यान दिएर विशेष ढुङ्गा परिणाम पदार्थ मिलेका। को आविष्कार कै Lun कागज को थप सुधार लागि सुरु बिन्दु थियो। नयाँ सामाग्री को आफ्नो "कर्पोरेट" संरचना मा पुरानो कागज थप टिकाउ र चिल्लो, विधानसभा-लाइन उत्पादन गर्न पछि नेतृत्व जो बनाउने, थपिएका थिए। र एक लामो समय को लागि मिडिया को इतिहास रोकियो, यसलाई समाप्त गरेका छन् भने गर्न सकिन्छ
VII शताब्दीमा कोरिया र जापान को कागज उत्पादन मास्टर को सुरुमा। र 150 वर्ष पछि अरब बारेमा थाहा हुनेछ। थप कागज प्रसार ढिलो थियो। यो युरोप केही अरब राज्य को बन्द प्रकृति कारण हो। तर, स्पेनिश विजय गोप्य फलस्वरूप बाहिर थियो र पश्चिमी युरोप भर वितरण।
Koroleva Elizaveta द्वितीय
बीजगणित र यसको विकास को उद्भव को इतिहास
रूसी सामान्य Kutepov Aleksandr Pavlovich: एक जीवनी, सेतो सेना मा सेवा, स्मृति
17 अक्टोबर, 1905 को मेनिफेस्टो: अवस्था र परिणाम
Sacco र Vanzetti - यो हुनुहुन्छ? हामी Sacco र Vanzetti के थाहा छ?
Geptral - प्रयोगको लागि निर्देशन।
हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण - सहयोगको हात
रबड टाईलहरू आफ्नै हातले। आफ्नो हातले रबर टाइलको निर्माण
अभिनेत्री Arefeva लिडियाले: जीवनी
कृतज्ञता - यो के हो? किन कृतज्ञ हुन महत्त्वपूर्ण छ?
निबंध "मानव विशेषताहरु": आफ्नो विचार कसरी व्यक्त गर्न
सुलेमानको मन्दिर - प्राचीन समयमा यरूशलेममा मुख्य मन्दिरमा
बालिका लागि बुना स्कर्ट: मूल मोडेल गरे crochet र बुनाई
अज्ञात चीन: उरुम्की विमानस्थल - देश को पश्चिमी गेट
Holter ईसीजी हृदय प्रश्नहरू निर्णय
बेलग्रेड मा "मातृभूमि" - ठूलो लडाई को सम्मान मा एक स्मारक
कसरी वा VDV विशेष सेना मा प्राप्त गर्न?